. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: March 2009
မနေ့က မေဒီ တယောက် သူများအိမ်ကို လာအော်သွားပါတယ် .. တက်ထားတယ်တဲ့ .. သိချင် အိမ်လာခဲ့တဲ့ .. ဒါနဲ့ ပြေးကြည့်တော့ မနက်ခင်းမှာ ဘယ်လိုအိပ်ရာထလဲတဲ့ .. ဒါနဲ့ သြော် ဒါများခက်တာလိုက်လို့ .. မထချင်ထချင် ကုန်းရုံးထတာပေါ့ .. :P
ကျမအလုပ်က ၈နာရီဆို တက်ပြီလေ .. သွားရတဲ့ခရီးကလည်း ၁နာရီလောက် ကြာပါတယ် .. ဒီတော့ မနက်ဆို ၆နာရီလောက်ထမှ အဆင်ပြေပါတယ် .. ၆နာရီထိုးပြီဆို "သဲရေ ထတော့ .. မနက် ၆နာရီထိုးပြီး ရုံးသွားရမယ်မဟုတ်လား .. မနိုးသေးဘူးလား .. ရုံးနောက်ကျတော့မှာပဲ .." ဆိုတဲ့ မောင့်ဆီက အသံကို ကြားရမယ်များထင်ပါသလား .. မထင်လိုက်ပါနဲ့ .. အဲဒီချိန်မှာ သူက အိပ်ကောင်းတုန်း .. ဖုန်းလှမ်းဆက်ဖို့မပြောနဲ့ ဖုန်းသံကြားရင်တောင် သီချင်းဖွင့်ပြထားတယ်ထင်နေမှာ .. :P
ဒီတော့ တကိုယ်တည်းအပျိုကြီး ကျမဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အားကိုးရာဆိုတဲ့အတိုင်း .. ကိုယ့်အလန်းလေးနဲ့ကိုယ် ထရတော့တာပေါ့ရှင် .. မနက် ၅နာရီခွဲမှာ အတူနေတဲ့ ၀မ်းကွဲအမက ထပါတယ် .. တခါတလေ သူ့အလန်းသံကြားရင် နိုးပါတယ် .. နိုးတယ်ဆိုတာ ထတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး .. ကျမက သစ္စာရှိတယ် .. :D .. ၆နာရီထမယ်ဆို ၆နာရီထိုးမှကိုထတာ .. အမက အရင် ရေမိုးချိုးနေတဲ့အချိန် ကျမက ဆက်နှပ်နေပါတယ် .. ၆နာရီ အလန်းမြည်ပီဆိုမှ ကိုယ့်အလန်းကိုယ်ပိတ် .. ပြီးနားစွင့်နေသေးတယ် .. အမ ရေချိုးခန်းက ထွက်ပြီလားလို့ .. သူမထွက်သေးပဲ ကျမထတော့ရော ၀င်လို့မှမရသေးတာ .. အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချရမယ်မှတ်လား .. :D
ကျမ နေ့စဉ် နိုးထမှုကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ .. သူများတွေလိုနှိုးမယ့်လူမရှိတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရတာပေါ့လေ .. ကျမချစ်သူနှိုးတတ်တဲ့ အချိန်တော့ရှိတယ် .. ဘယ်အချိန်လဲဆို သူအိပ်မရသေးတဲ့အချိန်လေ .. ရန်ကုန်မှာ ဘောလုံးပွဲကောင်းလို့ သူမအိပ်ဘူးဆို ညဘက် ဒီမှာ ၁နာရီ ပတ်ဝန်းကျင် ကျမအိပ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆို သူနိုးပြီ .. ခေါ်ပြီးဘာပြောတယ်မှတ်လဲ .. "သဲ အိပ်နေတာလား"တဲ့ .. "ဆောရီးနော်တဲ့ .. သတိရလို့ပါတဲ့" :P အဲလိုဆိုတော့လည်း အပြစ်မမြင်ရက်ပါဘူး .. သူသတိရလို့ပဲဆိုပြီး :P (ကြော်ငြာဝင်သူများကို မကျေနပ်၍ ပြန်ကြော်ငြာသည် :P)
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲရှင် .. :P
မေဒီရေ ကိုယ်လည်း မေဒီလိုပါပဲ .. ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ထရပါကြောင်း .. ချစ်လွန်းလို့ ရေးပေးတာ :D
ဆက်ပြီးတော့ ခင်မင်သူများကိုတက်ပါဦးမယ် .. ရေးပေးကြနော် .. ပီအမ် မနောသား သက်ပိုင်သူ မောင်မျိုး မကဗျာ တို့ရဲ့ မနက်ခင်းနိုးထပုံလေးကို သိချင်ပါတယ် .. ရေးပေးကြပါဦး ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/31/2009 10:45:00 AM 15 comments:
မျှော်လင့်ချက်ထားဘူးပါသလား .. မျှော်လင့်ထားသမျှ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးဘူးပါသလား .. မျှော်လင့်ချက်တွေ အရောင် ပြယ်ပျောက်ဘူးပါသလား .. ခံစားဘူးသူတွေသိမှာပေါ့ .. ဘယ်လောက် ဆိုးလိုက်တဲ့ခံစားမှုလည်းဆိုတာ ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/30/2009 02:17:00 PM9comments:
ရေးသားသူ moekhar at 3/30/2009 01:26:00 PM 8 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 3/28/2009 01:32:00 PM9comments:
ခုနောက်ပိုင်း စကားတခွန်းပြောတော့မယ်ဆို တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားပြီးမှ ပြောတတ်လာတယ် .. ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲကပြောချင်နေတာ မပြောရတော့ တနုံ့နုံ့နဲ့တော့ ခံစားရတယ် ..
စကားနဲ့ရန်စဲဆိုတဲ့စကားက တော်တော်မှန်ပါတယ် .. လူတွေ တော်တော်များများကလည်း မပြောပဲ ငြိမ်ခံနေရင် တော်တော်သဘောကျတတ်ကြတယ် .. အဲဒီလူ့သဘောတွေကို သိလာမြင်လာရရင်လည်း တော်တော်စိတ်ညစ်မိတယ် .. ခုလည်း စိတ်ညစ်စရာတခုကြုံရပြန်ပြီ ..
အရာအားလုံး ပြုပြင်ရင် အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်သတဲ့လား
ရင်ထဲက ဒဏ်ရာကို ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ
ကျမစိတ်ကို နာကျင်စေတဲ့ ညီမလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ် .. ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ ခုမရှိတော့ဘူးပေါ့ .. ?????????
ရေးသားသူ moekhar at 3/27/2009 01:57:00 PM7comments:
ရေးသားသူ moekhar at 3/26/2009 03:59:00 PM 13 comments:
ကျမအကျင့်က သီချင်းသံကြားရင် လွမ်းတတ်တယ် .. ဓါတ်ခံရှိလို့နေမယ် .. :D ခုဒီသီချင်းကြားရင်လည်း လွမ်းတယ် .. (အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာတယ်နော် ..) ကောင်းမြတ်ရဲ့ ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ သီချင်းလေးပါ .. ဒေါင်းချင်ရင် (ဒီမှာ) ပါ
ရေးသားသူ moekhar at 3/26/2009 02:13:00 PM2comments:
ပထမ မောင်မျိုးက တက်တယ် .. နောက်တော့ ကိုဝင်းဇော်က တက်ပြန်ရော .. တော်သေးတယ် .. ခေါင်းစဉ်က တူတူပဲ .. မရေးချင်လည်းရတယ်တဲ့ .. ရေးပေးစရာလား .. ဘာမှရေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး .. :P .. ဟဲဟဲ အလယ်ကားပြောတာ .. ရေးချင်လွန်းလို့ ဘယ်သူတက်မလဲစောင့်နေတာ .. :D .. တခါတည်း ကြိုစဉ်းစားထားတယ် .. ဘယ်သူ့ဆက်ဒုက္ခပေးရကောင်းမလဲလို့ ..
ကိုယ့်ရဲ့ ၀ါသနာလေးတွေ ဖလှယ်ကြမယ်တဲ့ ..
ကျမမှာ ၀ါသနာတွေက တော်တော်များတယ် .. ငယ်ငယ်ကနေ ခုချိန်ထိပဲ .. ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ၀ါသနာတွေပေါ့ ..
ငယ်ငယ်လေးတုန်းက အရမ်းချစ်ရတဲ့ အမ၀မ်းကွဲတယောက်က သူ မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တုန်းက ဆရာဝန်ကို ၀ါသနာပါသလိုလို .. တကယ်တော့မဟုတ်ပြန်ဘူး .. ကြားပါများလို့ လိုက် ယောင်နေတာလေ .. ၁၀ တန်းလောက်ထိ တကယ်ဖြစ်ချင်တာက အင်ဂျင်နီယာ .. ဘာရယ်တော့မသိဘူး .. တိုက်တွေဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်ခဲ့တာ .. တကယ် လက်တွေ့ကျတော့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး .. ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတော့ ဒေးတက်မယ်ဆိုပြီး အင်ဂျင်နီယာကို ပထမဦးစားပေး .. အီကိုကို ဒုတိယ ဦးစားပေးနဲ့လျှောက်ခဲ့တာ .. အိမ်ကိုခေါ်စာလာတော့ အီကိုပဲလာခဲ့တယ် .. ဘာပဲလာလာ ဒီကတော့ အေးဆေးပဲ .. အင်ဂျင်နီယာမရပါလားဆိုပြီးလည်း ဘာဖီလင်မှမရှိခဲ့ဘူး .. ဒီတော့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း ရင်ထဲက မပါခဲ့ပြန်ဘူးထင်တယ် ..
ကံတရားကပဲဆန်းကျယ်တာလား .. ကျမစိတ်ကပဲ အပြောင်းအလဲမြန်လွန်းတာလား များလွန်းတာလားတော့ မသိဘူး .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ အဖော်ကောင်းတာနဲ့ လုံးဝ ၀ါသနာမပါတဲ့ အီကိုကို အဝေးသင်ပဲတက်ခဲ့တယ် .. ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျောင်းပြီးသွားခဲ့တယ် .. အဲလိုဆိုတော့ ကျမမှာ ဘ၀နဲ့ချီပြီး ပါခဲ့တဲ့ ၀ါသနာ ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ၀ါသနာဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူးလား .. ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်ခဲ့ဘူး .. ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ရည်မှန်းချက် မရှိတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် .. :D
နောက်ထပ် ဘ၀နဲ့ မချီတဲ့ ၀ါသနာတွေတော့ ရှိတယ် .. အများကြီးပဲ .. ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကျတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ခဏခဏ ပြောင်းလဲပြန်ရော .. သီချင်းဆိုတာလည်း ၀ါသနာပါတယ် .. စီးရီးထုတ်ပေးမယ့်လူသာရှိရင် တက်ဆိုတယ် :P .. (ထုတ်ပေးချင်တဲ့လူရှိရင် အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ် .. အသံကတော့ အဟတ်ဟတ် :P.. အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ :D)
နောက်တခုက စာဖတ်တာ .. အိမ်မှာတယောက်တည်းရှိလို့ကတော့ ၀တ္တုစာအုပ်ကို ၃အုပ်လောက်ငှားပြီး ဆက်တိုက်ထိုင်ဖတ်တာ .. ခုတော့ မလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့ဘူး .. စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဆို အဆုံးထိ တဘရိတ်ထဲဖတ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တယ် .. အဲဒီချိန်ဘယ်သူခိုင်းခိုင်း မထဘူး .. နောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတာ လက်စွဲစကားပေါ့ .. :D
နောက်ထပ်နောက်ထပ်တွေလည်း အများကြီးပဲ .. ခရီးထွက်တာလည်း ၀ါသနာပါတယ် .. ဒါကိုတော့ တော်တော်များများလည်း ကြိုက်ကြမယ်ထင်တယ် .. ၀ါသနာလို့ ပြောနိုင်လားတော့မသိဘူး .. နှစ်သက်တဲ့ထဲပဲထည့်ရမလား .. ???
ပြီးတော့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် သူများယောင် လိုက်ယောင်တာလည်း ၀ါသနာပါတယ် .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လပ်ယားလပ်ယားလုပ်တာလည်း ၀ါသနာပါတယ် .. အိပ်တာနဲ့စားတာလည်း အပါအ၀င်ပေါ့ .. အစားကိုတော့ ဒီလောက် မမက်ဘူး .. အအိပ်ကို အရမ်းမက်တယ် .. မစားရရင်နေပါစေ အိပ်နေမယ်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး .. :D (ကိုယ့်ကိုယ် ဒီလောက် အမွှမ်းတင်နေမိပါပကော .. :P)
တကယ်အတည်ကြီး ၀ါသနာပါတာကတော့ ကွန်ပျူတာပဲ .. ကွန်ပျူတာရှေ့ရောက်ရင် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ .. ပြီးတော့ စာရေးတာ ခုလို ဘလော့ရေးတာပေါ့ .. ကျမက စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူး .. ခဏပဲ .. ခုတော့ ဘလော့ရေးတာနဲ့ ဖတ်တာ ကွန်ပျူတာကလိတာ ဒီဝါသနာတွေတော့ ပျောက်ပြယ်တော့မယ်မထင်ဘူး .. တော်တော်လည်းစွဲနေတယ် .. ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကူး ခံစားချက်တွေကို စာအဖြစ်နဲ့ ရေးချရတာ ၀ါသနာဖြစ်သွားပြီ .. ခုစွဲမြဲနေတဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ ၀ါသနာလို့ဆိုရင်တော့ စာရေးတာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ ဘလော့မွှေတာ၊ ကွန်ပျူတာ ကလိတာလို့ပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ..
ခု ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်မှာ စွဲမြဲတဲ့ ၀ါသနာဆိုတာမှုန်ဝါးဝါးဖြစ်နေသလိုပဲ .. လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာတွေနဲ့ အသားကျနေရတဲ့ ဘ၀ကြီးထဲမှာ ၀ါသနာ ကြီးကြီးမားမားမရှိတာပဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကျေးဇူးတင်ရမလိုလို .. :D နို့မဟုတ်ရင် စိတ်ဆင်းရဲနေရဦးမယ် .. :D (ဖြေတွေးခြင်း :P)
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုယ့်စာကိုယ်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြီးပွားတိုးတက်မယ့်လူလို့ မှတ်ချက် ချမိပါကြောင်း .. :P (သူများမပြောခင်ကြိုပြောထားတာ .. သူများအပြောတော့မခံဘူး .. :D)
ဆက်ပြီး ဒုက္ခပေးလိုက်ဦးမယ် .. သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသော .. ဗညားရှိန် ပီအမ်(ဖြိုးမော်) ဘာတွေတုန်း မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) ကဗျာမလေး သီဟသစ် မေဒီဇာ တို့ကို ဆက်ဒုက္ခပေးပါတယ် .. စပ်စုကြည့်တာပေါ့ .. ဘာတွေများဝါသနာပါမလဲလို့ .. ရေးပေးကြနော် .. မရေးရင် မခင်ဘူးမှတ်လိုက်မယ် .. :D
နောက်တိုး သက်ပိုင်သူ အစကတည်းက တက်မလို့ .. စာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေမလားဆိုပြီး စေဒနာနဲ့ မတက်တာ .. ခုတော့ တက်လိုက်ပါပြီ ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/23/2009 10:34:00 AM 14 comments:
ငါတို့ ခင်မင်ကြတာ အဖြူထည်သက်သက်
အရှုပ်အရှင်း စာရင်းတွေ မပါဘူး
တယောက်လိုအပ်ရင် တယောက်က ဖြည့်ဆည်း
တယောက်မှာ ရှိတာ အကုန်ဝေစား
ငါတို့ နှစ်များစွာ လက်တွဲခဲ့တယ်
ရေးသားသူ moekhar at 3/21/2009 12:59:00 AM6comments:
ရေးသားသူ moekhar at 3/19/2009 04:03:00 PM9comments:
ခု အာရုံရနေတာ ဒီသီချင်းလေးပေါ့ .. ထန်မ်ဘွိုင်းနဲ့ စီစီဖြူဆိုထားတာပါ .. အိမ်ရောက်လို့ ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီသီချင်းလေးနားထောင်မိတယ် .. အကြိုက်ချင်းတူလို့ လိုလည်း လိုချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ .. ဒီမှာ (ညီမျှခြင်း) ဒေါင်းလို့ရတယ်နော် ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/17/2009 01:47:00 PM6comments:
စိုးရိမ် ကြောင့်ကြနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတခုကို တကယ် နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ခံနိုင်ရည်မရှိတတ်ကြဘူး .. ကျမရော ..
"မောင် .. ကျမကို ဘယ်တော့မှ မခွဲသွားပါနဲ့နော် .." သူမ တောင်းပန်တိုးလျှိုးသံကို မောင်က နှစ်လိုစွာ ပြုံးရင်း .. "မောင် ဘယ်တော့မှ နှင်းကို မခွဲသွားဘူး .. ကတိပေးတယ်နော် .." ဆိုတဲ့ ဒီစကားတခွန်းထဲနဲ့ သူမ ယုံကြည်ခဲ့တယ် .. ကျေနပ်ခဲ့တယ် .. မောင့်အပေါ် သံသယဆိုတာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် မထားခဲ့ဘူး .. ဒါတွေက ကျမ ညံ့ခဲ့တာလား .. ကျမ အားနည်းချက်လား .. အယုံလွယ်လွန်းခဲ့တာလား ..
ကျမနဲ့ မောင်တို့ တွေ့ဆုံဖြစ်ပုံက မထူးခြားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ .. ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အထိ ကျမတို့ အဖြစ်အပျက်က အလွန်ကို သမားရိုးကျဆန်တယ် .. သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေက တဆင့် ကျမတို့ ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ် .. အစစ အရာရာ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်လွန်းပေမယ့် ကျမတို့ တယောက်အကြိုက် တယောက်လိုက်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတယ် .. မောင်က အဖြူရောင်က သိပ်နှစ်သက်ပေမယ့် စည်းကမ်းမရှိတဲ့ ကျမက အနက်ကစလို့ အရောင်ရင့်တွေကိုသာ ၀တ်ဆင်လေ့ရှိတယ် .. ကျမက ကော်ဖီသိပ်ကြိုက်သလောက် မောင်က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်တောင် အအေးပဲ သောက်တတ်သူတစ်ဦး .. ကျမက မိုးရွာတာကို နှစ်သက်ပြီး မောင်ကတော့ မိုးရွာတာကို အပြစ်တခုလို အနှောင့်အယှက်တခုလို မြင်တတ်သူ .. အစစ အရာရာ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်လွန်းပေမယ့် မောင်က ကျမကို လိုက်ရောပြီး မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့သလို ကျမကလည်း မောင်မကြိုက်တဲ့ ကော်ဖီကို မောင်နဲ့တွေ့ရင်မသောက်ဖြစ်ပဲ မောင်နဲ့ အတူ အအေးလိုက်သောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် .. ကျမတို့ သိပ်ချစ်ခဲ့ကြတာပဲနော် ..
ခုတော့ မောင်က ကျမသိပ်ကြိုက်ပေမယ့် မောင်နဲ့ အတူဆို မသောက်ဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီကို သူ့ချစ်သူ အသစ်စက်စက်လေးနှစ်သက်အောင် လိုက်သောက်တတ်နေပြီ .. ဘယ်လိုယုံရပါ့မလဲ .. ကျမအပေါ် သိပ်ချစ်တတ်တယ် .. သိပ်ချစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ (ကျမအထင်ပါ..) မောင်က ခု နောက်တစ်ယောက်အပေါ် ကျမကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေထက်တောင် ပိုချစ်နေခဲ့ပြီလား .. ကျမတွေးရင်း ရင်ဘတ်က အောင့်သက်သက်ဝေဒနာ ခံစားလိုက်ရတယ် .. အသည်းကွဲတဲ့ ခံစားချက်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ ..
မောင်က ကျမကို ချစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူးတဲ့လေ .. ကျမကလည်း မောင့်ပေါ် နားလည်ပေးနိုင်လွန်းခဲ့ပါတယ် .. ကိုယ့်ကိုယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့ .. မောင်က အလုပ်သိပ်များသူတယောက် .. သူ့ အလုပ်တွေအပြင် မိသားစုလုပ်ငန်းအတွက်ပါ အချိန်ပေးရတဲ့ မောင့်အပေါ် ကျမ မညိုငြင်ခဲ့ဘူး .. မောင်လာကြိုမယ်ပြောပြီး မရောက်ခဲ့လို့ တယောက်တည်း အပြန်လမ်းမှာ မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတာတွေ .. မောင်ချိန်းလို့ လာစောင့်နေပေမယ့် အမြဲတမ်း နာရီဝက် တနာရီ နောက်ကျမှာ ရောက်လာတတ်လို့ စိတ်တို ဒေါသထွက်နေရင်တောင် မောင့်မျက်နှာ မောင့်အပြုံးကို မြင်လိုက်ရင်ပဲ အလိုလို ပြေပျောက်သွားတတ်တယ် .. ဒီလောက်တောင်ပဲ ကျမအပေါ် လွမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တယ် .. စိုးမိုးနိုင်ခဲ့တယ် .. ကျမ မောင့်ကို အလိုလိုနေရင်းနားလည်ပေးမိတယ် .. အပြစ်မတင်မိဘူး .. ကျမ မောင့်ကိုချစ်နေရရင် ကျေနပ်နေတတ်တယ် .. ဒါတွေက အတ္တကင်းတဲ့ ကျမမောင့်အပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေထင်ပါရဲ့ ..
တနေ့တော့ မောင်ပြောလာခဲ့တယ် .. ပြောတဲ့အချိန်တုန်းက ဒီလောက် စိုးရိမ်စရာ ကိစ္စ(မောင့်ကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အထိပေါ့ ..) ဖြစ်လာလိမ့်မယ် မထင်ထားခဲ့မိဘူး .. မောင် ကျမကို သိပ်ချစ်တာပဲလို့ မောင်စကားတွေကို ယုံကြည်ပြီး တစ်ယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ် .. ပြသနာ အစလို့ မသိခဲ့ချိန်ထိ .. မောင့်စကားတစ်ခုပဲ ကိုးကွယ်ခဲ့တယ် .. မောင့်ငယ်သူငယ်ချင်းလို့ သိထားတဲ့ မောင့်ငယ်ချစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူတစ်ယောက် မောင့်ဘ၀ထဲ ပြန်ဝင်ရောက်လာခြင်းက ကျမအတွက် ကံဆိုးခြင်းစတင်ချိန်ပေါ့ .. မောင် သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ တွေ့ကြောင်း ၀မ်းသာအားရပြောတုန်းက မောင့်မျက်ဝန်းတွေအရောင်လက်နေခဲ့တာ ကျမက ရိုးရိုးသာမန်ပျော်ရွှင်ခြင်းလို့ တုံးတုံးအအ တွေးခဲ့ထင်ခဲ့တယ် .. ဒါတွေက မောင့်ရင်ခုန်သံတွေလို့သာသိခဲ့ရင် ကျမ တခုခုကြိုတင်ကာကွယ်ခဲ့မှာပေါ့ .. ကျမသိပ်နုံလို့ခံရတာပဲ .. မောင့်အပြစ်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး .. ခုချိန်ထိ ဘာလို့များ အပြစ်မတင်မိတာပါလိမ့်နော် ..
မောင် ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ လက်ရှိချစ်သူကြားဗျာများခဲ့ချိန်တွေမှာလဲ ကျမက မောင့်ကို သနားနေခဲ့သေးတာ .. မောင့်ရင်နာရင် ကျမရင်တွေကွဲအက်နေတာ မောင်မသိခဲ့တာလား .. လစ်လျူရှုခဲ့တာလား .. မောင် ကျမကို ထားခဲ့တော့မယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် မောင်လိုအပ်လို ဆက်သွယ်လာရင် မငြင်းမိပဲ မောင့်ဘေးနားနေပြီး စကားလုံးတွေ ရှာကျန်နှစ်သိမ့်ပေးမိတာတွေက ကျမ သိပ်အခဲ့လို့လား .. အမှတ်မရှိခဲ့လို့လား .. အဲဒီအချိန် မောင့်ပါးစပ်က ပြောလာတဲ့ ငယ်ချစ်ကို သိပ်ချစ်ကြောင်း စကားတွေကို ကျမ ဘယ်လိုရင်ဘတ်နဲ့ နားထောင်ပေးခဲ့မိပါလိမ့် .. ကိုယ်တိုင်တောင် နားမလည်နိုင်လောက်အောင် မောင့်အပေါ် ကျမ ချစ်ခဲ့တယ် .. အဲဒီအတွက် ကျမ ရရှိခဲ့တာက ဘာလဲ .. စွန့်ပစ်ခံရခြင်းတဲ့လား .. တရားရဲ့လားမောင် .. ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးကို လက်မခံချင်ပဲ လက်ခံခဲ့ရတယ် .. ဒါတွေဟာ အမှန်တရားတွေပဲတဲ့လေ ..
အမှန်တရားဆိုတာ ရှောင်လွှဲလို့မှ မရနိုင်ခဲ့တာပဲ .. နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ .. လိုချင်သည်ဖြစ်စေ မလိုချင်သည်ဖြစ်စေ ကြုံဆုံရမှာပဲလေ .. အကောင်းအဆိုး အားလုံး လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ ..
အမှတ်ရနေသူအတွက်သာ အသုံးဝင်တာပါ ..
အတိတ်ဆိုတာကလည်း မေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် တကယ်ရှိခဲ့တာပဲလေ ..
ခုချိန်ထိတော့ ကျမက အတိတ်ကို အမှတ်ရနေသူတစ်ဦးပါပဲ ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/15/2009 12:13:00 AM 11 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 3/12/2009 01:12:00 PM7comments:
မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာထတာနဲ့ သတိရမိတယ် .. စားဖို့သောက်ဖို့ဘာရှိလဲ လှန်လှောကြည့်ဖို့ကိုပေါ့ .. (ဗိုက်ဆာတာကိုး .. :P)
တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်လုပ်နေရင်းကိုသိပ်လွမ်းတာ .. အိမ်က အိပ်ရာလေးကိုပေါ့ .. အိပ်ငိုက်တာကိုး (အချိန်တိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး .. ထမင်းစားပြီးခါစကိုပြောပါတယ် ..:P)
မိုးတွေရွာပြီဆိုလည်း သတိရတတ်သေးတယ် .. အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ထီးလေးကိုပေါ့ .. (ကျမက ထီးကိုင်ရမှာပျင်းသလို မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထားထားခဲ့တတ်တယ် .. :D)
တခါ တခါကျလည်း လမ်းသွားရင်း နောင်တရတတ်သေးတယ် .. ဒေါက်ဖိနပ်ကြီးတကားကားနဲ့ ဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပေါ့ .. (ဒေါက်ဖိနပ်စီးရတာကြိုက်တယ် .. လမ်းလျှောက်တာများရင် တရွတ်တိုက် ဆွဲချင်လောက်အောင် ညောင်းတယ် ..းP)
တခါတလေကျတော့လည်း စိတ်ထဲက အသည်းအသန်ကြိတ်ဆုတောင်းရသေးတယ် .. သူမြန်မြန်လာပါစေလို့ ပေါ့ .. (အိပ်ရာထနောက်ကျပြီဆိုရင် စီးနေကျကား လွတ်သွားတဲ့အခါ နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်စောင့်ရပြီဆို လာကြိုမယ့် ဖယ်ရီလွတ်ပြီလေ .. :P)
ရေးသားသူ moekhar at 3/10/2009 09:14:00 AM 8 comments:
ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ မိုးပြာရောင်နဲ့ ကြည်လင်နေရဲ့ .. ကောင်းကင်ကြီးသာ ကြည်လင်နေတာပါ .. ကျမစိတ်တွေကတော့ နောက်ကျနေခဲ့တယ် .. ကောင်းကင်ကြီးကြည်လင်တာကို သဘောကျပေမယ့် ကောင်းကင်လို ကြည်လင်နိုင်ဖို့ကိုတော့ မကြိုးစားခဲ့ဘူး .. ကောင်းကင်ကြီးကြည်လင်တာ နောက်ကျိတာ ကျမအလုပ်မှ မဟုတ်ပဲ .. ကျမနဲ့မှ မဆိုင်တာ .. ကျမခုခံစားနေရတာတွေသာ ကျမနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလား ..
ကျမစိတ်တွေ ညိုမှောင်နေတယ် .. ဘာလို့လဲ .. အဖြေကို သေချာလိုက်စဉ်းစားတော့လည်း အကြောင်းအရာ မယ်မယ်ရရက မရှိ .. စိတ်တွေ ညစ်ညူးနေတယ် .. အကြောင်းရင်း ဇစ်မြစ်ကို ရှာကြည့်တော့ အဖြေကေ၀၀ါးလို့ ..
ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်နေတုန်း တိမ်ညို တိမ်မဲတွေ တရိပ်ရိပ် တလိတ်လိတ် တက်လာတယ် .. ကျမ ပျော်မိသလိုပဲ .. ကောင်းကင်ကြီးလည်း ကျမလိုပဲ ညစ်ညူးလာပြီ .. ကြည်လင်နေတဲ့အရောင်တွေ ပျောက်ကွယ်လို့ပေါ့ ..
ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ ကောင်းကင် ညိုမှိုင်းမှိုင်းကြီးက ဒေါသတွေ ၀မ်းနည်းမှုတွေကို မိုးရေစက်တွေ အဖြစ်နဲ့ ရွာချလိုက်တယ် .. ကျမ စိတ်ထဲ တော်တော်ကျေနပ်သွားတယ် .. ပြီးတော့ မိုးသံလေသံတွေနဲ့ အတူ ကျမရဲ့ ၀မ်းနည်းမှု တွေကိုပါ ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်တယ် ..
မိုးသံလေသံတွေ တ၀ုန်းဝုန်းကြားမှာ ကျမရဲ့ ငိုသံဆိုတာက မှုန်မွှားမွှားလေးရယ်ပါ .. ဘယ်သူမှ မကြားနိုင်ဘူးလေ .. ကျမ ကောင်းကင်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ .. ကျမရဲ့ ငိုရှိုက်သံတွေကို ဖုံးဖိပေးထားလို့ပေါ့ ..
PS. ဟိုတနေ့က ရူးကြောင်ကြောင် လျှောက်ရေးထားတာပါ .. ခုတော့အားလုံးအေးဆေး :D
ရေးသားသူ moekhar at 3/07/2009 12:20:00 AM6comments:
ဒီသီချင်းလေးကို အခု အရမ်းကြိုက်တယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/06/2009 10:49:00 AM2comments:
အလွမ်းဆိုတာ ဝေးပြီးမှသိနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲ .. ဝေးနေချိန်မှာ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုပြီး မလွမ်းတတ်ခဲ့လို့ ခုချိန်မှာ အလေ့အကျင့်မရှိခဲ့ဘူးလေ ..
ဒီလိုသာ အကြာကြီး ခွဲရမယ်မှန်းသိရင် တွေ့ဆုံချိန်တွေကို လက်ရှိထက်ပို တန်ဖိုးထားခဲ့မိမှာပဲ .. ခုချိန်မှာ နောင်တရစရာမရှိပေမယ့် နှမြောနေမိတာ အမှန်ပဲ ..
ချစ်ပြီး လွမ်းရမယ်မှန်း သေချာသိခဲ့ရင် ငါ့စိတ်တွေကို အချိန်ရှိတုန်း ပြုပြင်ခဲ့မိမှာပဲ .. ခုတော့ ငါသိလိုက်တဲ့ချိန်မှာ အနားမနေနိုင်သေးတဲ့မင်းကို ငါလွမ်းနေတတ်ပြီလေ ..
အချစ်ပင်လယ်မှာ အလွမ်းတွေပျော်ဝင်စီးဆင်းနေတယ် .. ငါ့မှာသာအစွမ်းရှိရင် အလွမ်းတွေ ကုန်အောင် ခပ်ထုတ်ပစ်ချင်ရဲ့ ..
အချိန်တွေကို ပြောင်းလဲပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင် ကျော်ဖြတ်ရမယ့် အချိန်အတိုင်းအတာကို ငါရစ်ပြစ်ချင်တယ် .. မဟုတ်ရင်လည်း နီးစပ်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ ရပ်တန့်ပြီး အတိတ်မှာပဲ နစ်မြုပ်ချင်တယ် ..
ငါပိုင်ဆိုင်မယ့် ပန်းချီကားတစ်ချပ် သေချာတယ်ဆိုရင် ဘာမှထပ်ပြီး ခြယ်မှုန်းမနေချင်တော့ဘူး .. ဒီပန်းချီကား တန်ဖိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ငါ့လက်လှမ်းနိုင်တဲ့နေရာထက် ဝေးသွားမှာ ငါကြောက်နေတယ် ..
ငါတွေးပူနေတာတွေ သိပ်များနေပြီထင်တယ် .. တကယ်တော့ နင်နဲ့ ငါ ပိုင်မယ့် ပန်းချီကား အလှပဆုံးဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အတူရေးဆွဲလိုက်မယ်နော် ..
စိတ်ကူးယဉ်တာကို ဝေးဝေးရှောင်တဲ့ ငါတစ်ယောက် ခုတော့ စိတ်ကူးထဲမှာ မျှောလွင့်နေတတ်ပြီ ..
ရေးသားသူ moekhar at 3/04/2009 09:43:00 AM9comments: